ကျယ်ပြန့်သောဥရောပနိုင်ငံများသည်ဒဏ္legာရီများနှင့်နတ်သမီးပုံပြင်များ၏မူလအစဖြစ်သည်, ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရှုခင်းများ, ရှေးဟောင်းလျှို့ဝှက်ချက်များကိုစောင့်ရှောက်သောကျေးရွာများ. အလယ်အလတ်နာမည်ကြီးမြို့ကြီးများနှင့်နီးစပ်သောသို့မဟုတ်ထုံးကျောက်တောင်များနောက်ကွယ်တွင်ပုန်းနေလိမ့်မည်, ဥရောပရှိပါ ၀ င်ပြီးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောကျေးရွာများသည်အဆုံးမဲ့ဖြစ်သည်. သေး, ရှိပါတယ် 10 အခြားအလှကုန်များနှင့်မှော်အတတ်များသည်အခြားနေရာများကိုကျော်ဖြတ်နိုင်သည့်ဥရောပရှိသာယာလှပသောကျေးရွာများဖြစ်သည်.
အိမ်ဖြူတော်များသည်ရိုးရာပန်းချီကားများနှင့်အလှဆင်ထားသည် sgraffiti ဟုခေါ်တွင်ရှေးဟောင်းကျောက်စာ. ရောမ, ဒေသခံဘာသာစကား, အသက်ရှင်ကျန်ရစ်နှင့်နေဆဲယနေ့ပြောပြီဖြစ်ပါတယ်.
Moselle မြစ်ကမ်းနားမှာရှိတဲ့ရွာ. ကျဉ်းမြောင်းသောလမ်းများတစ်လျှောက်တွင်သစ်သားအိမ်များနှင့်သာယာလှပသည့်အိမ်များ. ကျဆုံးခြင်းအတွက်လှပသော, စိမ်းလန်းသောမြက်ခင်းများနှင့်သစ်ပင်များသည်သူတို့၏ရွှေအဝတ်အစားများကိုဝတ်ဆင်ကြသည်, လှပသော Cochem ၏ဆွဲဆောင်မှုနှင့်သာယာလှပသော setting ကိုထည့်သွင်း.
စပျစ်ဥယျာဉ်များကဝိုင်းရံခြင်းနှင့် တောင်ကုန်းများ, ကိုခမ်းကျေးရွာသည်ပို့စကတ် - ပြီးပြည့်စုံသောလူဖြစ်သည်. ရွာကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်နှင့်သာယာလှပသည့်ရှုခင်းများကိုမြင်နိုင်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းမှာစက်ဘီးဖြင့်ဖြစ်သည်.
စိန့်. Genies ရွာကငါတို့အင်္ဂါရပ်များ 10 မတ်စောက်သောအိမ်ခေါင်မိုးများကြောင့်ဥရောပရှိသာယာလှပသောကျေးရွာများဖြစ်သည်. ဖြည့်စွက်ကာ, ၁၂ ရာစုဘုရားရှိခိုးကျောင်းနှင့် ၁၃ ရာစုရဲတိုက်တို့သည်ကျေးရွာ၏အလယ်တွင်တည်ရှိသည်. အကွေ့အကောက်များသောလမ်းသည်ရွာနှင့်၎င်း၏အနက်ရောင်အရောင်ရှိသောကျောက်တုံးများကိုအထင်ကြီးလောက်သောရှုထောင့်များနှင့်နေရာများသို့ဖြတ်သန်းသွားလိမ့်မည်.
Cesky Krumlov ရဲ့မမေ့နိုင်စရာမြင်ကွင်းတစ်ခုအတွက် Cesky Krumlov ရဲတိုက်ကိုတက်ဖို့အကြံပေးလိုပါတယ်, အဆိုပါ Vltava မြစ်, နှင့် Bohemia ဒေသတဝိုက်ခမ်းနားသဘောသဘာဝ.
သင် ... လုပ်ပါသလား ကျွန်ုပ်တို့၏ blog post "10 မြှုပ်နှံချင်တယ် ဥရောပမှာတော့သာယာလှပကျေးရွာများသင်၏ site ပေါ်သို့? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/scenic-villages-europe/?lang=my ‎– (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
beautifuldestinations မင်္ဂလာပါ Fairytaletowns ပန်းချီဆရာ ကျေးရွာပေါင်း